माइग्रेनको समस्याबाट मुक्ति पाउन यस्तो छ घरेलु उपाय !! | सुदुरपश्चिम खबर
माइग्रेनको समस्याबाट मुक्ति पाउन यस्तो छ घरेलु उपाय !!
पुरुषभन्दा महिलालाई माइग्रेनको समस्याले बढी सताउँछ ।यसबाट मुक्ति पाउने घरेलु उपाय हामी यहाँ बताउँछौं ।तुलसीको तेल प्रयोग गर्नुभयो भने माइग्रेनबाट छुटकारा पाउनुहुन्छ । यो तेलले मांसपेशीलाई शान्त बनाउँछ र टाउको दुख्ने कारणका रूपमा रहेको तनावलाई पनि घटाउँछ ।
केरामा प्रशस्त पोटासियम हुन्छ र यसको बोक्रामा बरफ हालेर टाउकोमा बाँध्नुभयो भने पनि माइग्रेनबाट मुक्ति पाउनुहुन्छ । यसरी बोक्रा बाँध्दा निधारले पोटासियम सोसेर आराम दिन्छ ।आलस खानुभयो भने पनि माइग्रेनबाट मुक्ति पाइन्छ ।बकह्वीटमा रुटिन नामक तत्त्व हुन्छ जसले माइग्रेन घटाउन मद्दत गर्छ । (gnewsnepal.com बाट सभार)
घरमै आइसोलेसनमा बस्दा साँस फेर्न गाह्रो भयो भने हेर्नुहोस् यी ९ उपायहरु !!
पत्रकार विनोदसिंह बिष्टले गरे जन्मदिनको अवसरमा अक्सिजन खरिदका लागि सहयोग !!